गर्भावस्थामा खान नहुने यी फलफूल !! सबैले जान्नैपर्ने कुरा! पढेर सेयर गरौँ - Nawalpur Dainik
गर्भावस्थामा खान नहुने यी फलफूल !! सबैले जान्नैपर्ने कुरा! पढेर सेयर गरौँ
April 18, 2021 by Nawalpur Dainik
ग’र्भा’वस्था एक महिला र उनको भ्रुणको लागि निकै नाजुक अवस्था हो । त्यसकारण यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने आफूले खाने प्रत्येक कुराको अतिरिक्त ध्यान दिन आवश्यक छ ।
ग’र्भा’वस्थामा तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ जसका कारण तपाईं र तपाईंको बच्चा ब्याक्टेरिया र भाइरसले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा केही यस्ता खानेकुरा छन् जसलाई खानबाट बच्नुपर्छ । आफ्नो बच्चा स्वस्थ र सुन्दर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने गर्भावस्थामा खान नहुने खानेकुराबारे यहाँ दिइएको जानकारी पढ्नुहोस् ।
Prevबिनाधितो रु तीन लाख उद्यमशील कर्जा दिन सहमति , सबैले हेरेर सेयर गर्नुहोस
Nextहो,सि,यार ! भुलेर पनि यी ७ व्यक्तिले नखानुहोस् अनार !